Humnootii Nageenyaa Kan Sudaan Dhiittaa Mirga Namoomaa Hamaa Waan Geesisniif Jecha Yunaaytis Istees Ugguura Irra Keessee Jirti
Bitootessa 21, 2022
Faayilii - Mormii Sudaan magaala Kaartuum keessatti fonqolcha mootummaa mormuudhan bahame, Sadaasa 17, 2021
Humna eeggataa Polisii waaltaa kan Sudaan hiriira Deemokraasii gaafachuun gaggeeffame irratti dhiittaa mirga namoomaa hamaa geesisee jechuunYunaaytid Istees ramaddee jirti.
Ministeera haajaa alaa Amerikaa Antonii Bliinkan biraa ibsii ba’e akka jedhutti, tarkaanfiin kunis kanneen dararaa rawwatan itti gaafatamoo taasisuuf akkasumas hokkara gara fuula duraatti gaggeffamu itisuuf akka ta’e ibsii ba’e hubachisee jira.
Gareen polisii hidhate kun namoota karaa nagaan hiriiran irratti yeroo hedduu deebii hokkaraan guutamee kan kenne yoo ta’u humna hammaa ba’e gargaaramuu isaaf akkasumas humna lubbuu namaa galaafate fudhachuu isaaf uggurru har’a kun irra ka’ame. Amajjii 17 rasaasa hiriirtoota irratti gargaaramuun ajjeechaa fi midhaa adda addaa kan geesisee yoo ta’u kunis Onkolooleessa 25 bara 2021 kaasee kan gaggeeffamaa ture keessaa tokko yoo ta’u kunis mootummaan irree waraanaa aangoo qabachuu isaa mormuun ture.
Yeroo kanattiis lubbuun hiriirtootaa humnaan galaafatamuu ykn dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabuun ibsamee jira.Gabaasaaleen humnaan gudeeddii, ajjechaa, dararaa, seeraan ala hidhuu fi kanneen biroo polisoota Kanaan akka gaggeeffame gabaafamaa jira.
Muddee 21 fi 22 akkasumas Bitooteessa 14 dubartootaa fi shamarran hiriiran irratti, humnaan gudeeddii fi hokkarri saalaa kanneen biroon gaggeeffamuun akkaan sukaneessaa ture jedha ibsi ba’e.
Gochii akkasii fudhatama kan hin qabne fi fedhii uummata Sudaan bilisummaaf qabu faallaa kan ta’e dha.Hokkarri polisoonni kun hiriirtoota irratti gaggeessaa jiran kunis dhaabachuu qaba jechuun ibsii ba’e hubachisee jira.